Snn Nepal ७ लाख ८४ हजार विद्यार्थीले किन पढाइ छाडे ! – Snn Nepal
७ लाख ८४ हजार विद्यार्थीले किन पढाइ छाडे !
काठमाडौँ । २०७७ सालको विद्यालय शिक्षा परीक्षा (एसईई) मा सहभागी हुन ५ लाख १७ हजार १२२ जना विद्यार्थीले आवेदन फारम भरेका छन् ।
उनका अनुसार जुन परिवार सक्षम र आर्थिक रुपले सबल छ त्यस्तो परिवारका बालबालिकाले बीचमा विद्यालय छोड्दैनन् । उनका अनुसार विद्यार्थीको उमेरसँगै उसमा थपिने जिम्मेवारीका कारणले पनि बीचमै विद्यालयबीचमै छोड्ने गरेको पाइएको छ ।